भारतले जोड्यो ३१४ रन ! – WicketNepal
भारतले जोड्यो ३१४ रन !
Bipul Bhattrai, २०७६ असार १७, मंगलवार १९:२३
विकेटनेपाल – १७ अषाढ, मंगलवार
इंग्ल्याण्डमा जारी एक दिवसिय विश्वकप क्रिकेट २०१९ अन्तर्गत मंगलवार भारत र बंगलादेश भिड्दै छन्। खेलमा पहिले ब्याटिंग गर्दै भारतले ३१४ रन जोडेको छ।
एज्बास्टनमा टस जितेर ब्याटिंग गरेको भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ३१४ रन जोडेको हो। उसका रोहित शर्माले सर्वाधिक १०४, लोकेश राहुलले ७७ र रिसभ पन्तले ४८ रन जोडे।
ओपनर लोकेश राहुल र रोहित शर्माले पहिलो विकेटका लागि १८० रनको साझेदारी गर्दा भारत ठूलो लक्ष्यतर्फ अग्रसर भएको थियो। तर आफ्नो अन्तिम स्पेलमा मुस्ताफिजुर रहमान र शाकिब अल हसनले उत्कृस्ट बलिङ्ग गर्दै बंगलादेशलाई खेलमा फर्काए। एकै ओभरमा मुस्ताफिजुरले बिराट कोहली र हार्दिक पान्ड्याको विकेट हात पार्दा भारतले अन्तिमका ओभरमा खुलेर रन जोड्न सकेन।
बंगलादेशको बलिङ्गमा मुस्ताफिजुर रहमानले सर्वाधिक ५ विकेट ( १०-१-५९-५ ) हात पारे। यस्तै शकिव अल हसन, रुबेल हुसेन र सोम्य सरकारको नाममा समान १-१ विकेट रह्यो।
रोहितको शतकमा रेकर्ड :
भारतको इनिंगमा ओपनर रोहित शर्माले सर्वाधिक १०४ रन जोडे। एक दिवसिय करियरको २६ औं शतक बनाउने क्रममा रोहितले मात्र ९२ बलमा ७ चौका र ५ छक्का सहित शतक पुरा गरेका हुन्। व्यक्तिगत ९ रनको स्कोरमा रहंदा मुस्ताफिजुर रहमानको बलमा तमिम इक्वालबाट क्याच छुटेका रोहितले त्यस्पस्चात आकर्षक ब्याटिंग गर्दै शतक पुरा गरे।
नियमित ओपनर शिखर धवन चोटिल भएपछि उनको स्थानमा ओपनिङ्ग गरिरहेका लोकेश राहुलले रोहित शर्मासंग ब्याटिंग गर्दै बंगलादेश बिरुद्धको खेलमा विश्वकपको नयाँ रेकर्ड कायम गरे।